अंग्रेजी भाषा सिक्न चाहानुहुन्छ ? तेसो भए वरिष्ठ समाजशास्त्री तथा कृषिशास्त्री श्री ईश्वर विक्रम सिंहले लेखेको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको जीवनी पढ्नुहोस् । सरल भाषा र सुललित शैलीमा लेखिएको यो पुस्तक मैले आजसम्म पढेका पुस्तकमध्येकै सर्वाधिक रमाइलो छ । पुस्तक पढेर यति धेरै पेट मिचीमिची यसरी म कहिलेपनि हाँसेको थिइनँ । पुस्तकको मूल्य रु. ५००/- छ । पूरा पैसा वसुल किताब छ । खोजीखोजी पढ्नुस् है ! विद्वान् जीवनीलेखकका लेखनका केही नमुना हेरौं है त ! मैले किताबबाट जस्ताको तस्तै सारेको छु ।
Posted by Bindesh Dahal at 2:41 AM
अंग्रेजी भाषा सिक्नचाहानुहुन्छ ? तेसो भए वरिष्ठ स...